कोलेस्ट्रोल रोग मुटुका लागि खतरा, कसरी गर्ने नियन्त्रण ? « Drishti News – Nepalese News Portal
काठमाडौं – मानिसमा कोलेस्ट्रोल देखिनु भनेको मुटु सम्बन्धी समस्या हुनु हो । शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा धेरै भएमा मुटु सम्बन्धी समस्या हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
शरीरमा ८० प्रतिशत कोलेस्ट्रोलको निर्माण कलेजोले गर्छ भने २० प्रतिशत कोलेस्ट्रोल भोजनबाट प्राप्त हुन्छ । शरीरमा अतिरिक्त कोलेस्ट्रोल जम्मा भएमा वा रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा उच्च भएमा यसले रक्तधमनीमा अवरोध पैदा गरी मुटु सम्बन्धी गम्भीर समस्या निम्त्याउने गर्छ । यसबाट हृदयाघातको सम्भावना समेत बढ्ने गर्छ । तसर्थ यसको नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ ।
(रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गर्न ओमेगा-३ फ्याटी एसिडको सेवन गर्ने जुन माछाबाट पाउन सकिन्छ । यसले खराब कोलेस्ट्रोल कम गर्नुका साथै राम्रो कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउने गर्छ । माछा सेवन नगर्नेको हकमा कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण राख्न पालुङ्गो राम्रो विकल्प हुनसक्छ । (शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई नियन्त्रित राख्न बोसोरहति तथा तारेको, भुटेको तथा चिल्लो खानेकुरालाई सकेसम्म कम गर्नुपर्छ ।
यसका लक्षण, कसरी कम गर्ने ?
—यसलाई कम गर्नका लागि प्राणायाम, व्यायाम तथा शारीरिक श्रम जरुरी पर्छ ।
—कालो चियाले पनि कोलेस्ट्रोल घटाउन मद्दत गर्ने हुँदा यसले नियमित सेवन शरीरका लागि लाभदायक मानिन्छ ।
—नियमित एक गिलास रेड वाइनको सेवनले पनि कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गर्न सकिन्छ ।
—डार्क चकलेट, स्ट्रबेरी, कालो अंगुर, कागती, सुन्तला, व्लुबेरिज, एभोकाडो, स्याउ, किवी, अनार जस्ता फलफूलको सेवनले शरीरको वोसो नियन्त्रणमा राख्छ । यसको सेवनले कोलेस्ट्रोलको मात्रा समेत कम हुने गर्छ ।
—रेशेदार खानेकुराका साथमा भिटामिन तथा मिनरलयुक्त खानेकुराको सेवनले पनि उच्च कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।
—मोटोपनालाई नियन्त्रण गरेर तथा शरीरको अतिरिक्त तौल कम गरेर पनि कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
—तनावले पनि मुटु सम्बन्धि समस्या बढाउने गर्छ । तनाव कम गरेर पनि मुटु सम्बन्धी समस्याबाट बचाउन सकिन्छ ।
—खाना खाएको करिब एक घण्टा पश्चात् मनतातो सादा पानी पिउने ।
—खाना खाएपछि करिब पाँच मिनेटसम्म आरामले बस्ने । त्यसपछि केही समय हल्का टहलिने ।
—खानाको बीचमा पानी नपिउने । खाना खाँदा आरामले बस्ने ।
—टुसा उम्रेका खानेकुरा खाने ।
—लसुन, प्याज, सोयाबीन आदि खानेकुरा पर्याप्त मात्रामा खाने ।